Daawo Sawiro: Meydadka Ciidamadii AMISOM ee lagu laayay Shabeelaha Hoose oo la geeyay Kampala. – wadankaaga.com
Home / Somali News / Daawo Sawiro: Meydadka Ciidamadii AMISOM ee lagu laayay Shabeelaha Hoose oo la geeyay Kampala.
cowke August 3, 2017	Somali News Leave a comment 34 Views
Meydadka Ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalka Uganda oo lagu laayay axadii lasoo dhaafay sagaal ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose ayaa la geeyay magaalada Kampala ee Caasimada dalka Uganda.
Diyaarad nuuca xamuulka qaada ayaa magaalada Muqdisho ka qaaday meydadka 12-askari oo katirsanaa Ciidamada AMISOM kuwaa oo lagu dilay dagaal ka dhacay Duleedka Degmada Buulo Mareer ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Saraakiil katirsan Ciidanka Milatariga dalka Uganda ayaa meydadka askarta la laayay kusoo dhaweeyay garoonka Diyaaradaha Entebbe ee magaalada Kampala, waxaana la filayaa in askaran loo sameeyo aas qaran.
Al Shabaab ayaa sheegtay dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose maalintii Axada ay ku dileen 39-askari oo katirsanaa Ciidamada AMISOM, hasa ahaatee waxaa warkaasi beenisay Wasaarada Gaashaandhiga Uganda oo sheegtay in kaliya looga dilay dagaalkaasi 12-askari.
Previous Dhageyso: Askar ku Geeriyootay Diyaarad ku Burburtay Djibouti
Next Madaxwene Trump oo Saxiixay Xayiraad lagu soo rogay Ruushka iyo Caro arintaasi ka dhalatay